Umkhiqizi Nomhlinzeki Wochungechunge lweChina Volvo Xinneng
Ukuqaphela kwemvelo yochungechunge lweVolvo Gen Setha ukukhishwa kwayo kokukhipha kuhambisana namazinga we-EURO II noma we-EURO III ne-EPA. Inikwe amandla yi-VOLVO PENTA injini edonsa ngodizili kagesi eyenziwe nge-Swedish VOLVO PENTA edume umhlaba wonke.
Umkhiqizo we-VOLVO usungulwa ngo-1927. Isikhathi eside, uphawu lwawo oluqinile luhlotshaniswa namanani alo ayisisekelo amathathu: ikhwalithi, ukuphepha nokunakekelwa kwemvelo. Inkampani engaphansi kweqembu iVOLVO iVOLVO PENTA igxile ekukhiqizeni izinjini zedizili ezimboni, izimoto zezimboni kanye nemikhiqizo yezinjini zodizili wasolwandle. Iqhubeka phambili emkhakheni we-injini yamasilinda ayisithupha kanye ne-electronic fuel injection technique njll.
Amapaneli elanga (abizwa nangokuthi amamojula wamaseli elanga) ahlanganiswe ngamaseli amaningi elanga, okuyingxenye eyinhloko yohlelo lwamandla elanga nengxenye ebaluleke kakhulu yohlelo lwamandla elanga.
Bore * Isifo sohlangothi
Imodeli eno “E” kukhona okubekwe eceleni kama-ower gensets;
I-China 0 # idizili elula noma ngaphezulu ibuyileKunconywe ama-sutech gensets anesihlukanisi samanzi kawoyela ukuqinisekisa ubumsulwa kaphethiloli.
Phakamisa ukwamukela i-API CF noma ngaphezuluuwoyela, izinga lokushisa / i-viscosity ye-15W-40
Langaphambilini Trailer Uhlobo Generator